Fabi အီတလီကုမ္ပဏီထံမှဘွတ်ဖိနပ်ကိုမိမိတို့အဘို့ကမ္ဘာတဝှမ်းအမျိုးသမီးတွေအများကြီး, ဒါပေမယ့်လည်းအကျော်ကြားဆုံးနှင့်သြဇာအဆိုတော်နှင့်မင်းသမီးမသာရွေးချယ်ပါ။ အမှတ်တံဆိပ်၏ပရိသတ်များအကြားဥပမာ, အဆိုတော်ချာပုံပေါ်ပါတယ်။
သမိုင်း Fabi အမှတ်တံဆိပ်
Fabi ဖိနပ်အိမ်, 1965 ခုနှစ်တွင်, 40 ကျော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်, Eliza နဲ့ Enrico Fabi တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူတို့ကထုတ်လုပ်သူဖိနပ်များ၏သာလွန်အရည်အသွေး, အဖြစ်ထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းကိုအပေါ်မှီခိုပါပြီ။ အဆိုပါဖိနပ်မော်ဒယ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အမှတ်တံဆိပ်၏အခြေခံအတွေးအခေါ်, Fabi ဖိနပ်ဖန်ဆင်းဝယ်လက်များ၏အမြင်အမည်ရ သာ. အရေးကြီးသောဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကဖြစ်ပါတယ်, ဒီအမှတ်တံဆိပ်၏ဒီဇိုင်နာများမတည်မငြိမ်ဖက်ရှင်ပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်မကြာခဏ၏မျက်နှာကို ထောက်. ဖောက်သည်အဆင်ပြေစေရန်ယဇျပူဇျောဘူး။
ဒါကထုတ်လုပ်မှုမှချဉ်းကပ်မှုပေါင်းအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးမော်ဒယ်ကညီအစ်ကိုတွေကိုအောင်မြင်စွာယနေ့တိုင်တည်ရှိသည့်ခိုင်မာသောကော်ပိုရေးရှင်းဖန်တီးခွင့်ပြုခဲ့ပါပြီ။ အမှတ်တံဆိပ်ဖိနပ်နှင့်အတူ Fabi ဖက်ရှင်ဆိုင်များလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီလိုင်းများမှာများစွာသောအရေအတွက်ကိုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ကလေးများ, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ဖိနပ်များ၏မော်ဒယ်များ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံထုတ်လုပ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဝယ် Fabi ဆုံးသူ့ကိုရန်မေတ္တာရပ်ခံကြလိမ့်မယ်လို့အတိအကျ pair တစုံကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကကုမ္ပဏီတောင်အားကစားမော်ဒယ်ထုတ်လုပ်ရန်စတင်ခဲ့ပြီးသည်, ထိုအမှတ်တံဆိပ်စတိုးဆိုင်များတွင်သင်သည်နေ့စဉ်သို့မဟုတ်ပွဲလမ်းသဘင်ရလဒျအဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းအားကစားနှင့်ကာတက်ကြွတဲ့လူနေမှုပုံစံအဘို့မသာရှေးခယျြစရာရှာတှေ့နိုငျယခုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီမဆိုဖိနပ် pair တစုံကိုဖြည့်ဖို့ accessories များကျယ်ပြန့်ထုတ်လုပ်သည်။
အမည်ရ, အမျိုးသမီးရဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဘွတ်ဖိနပ် Fabi - ကုမ္ပဏီဒီဇိုင်နာများရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဖိနပ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအကြီးအအာရုံစိုက်။ ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်အပြင်, သူတို့ကသူ၏အမြှောင်၏ခြေထောက်နွေးဖို့ကောင်းသောလည်းရပါမည်ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ ဒီဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်ကနေဘွတ်ဖိနပ်တစ်မူထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်ထုတ်လုပ်မှု၏အားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာထိန်းချုပ်သောအသုံးပြုသောစက်ချုပ်နှင့်ပစ္စည်းများ၏အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေး, အဖြစ်ကျယ်ပြန့်သည်။ သားရေနှင့်တရားစွဲ: ဒါဟာတူညီတဲ့ပုံစံကိုမကြာခဏနှစ်ခုဗားရှင်းထွက်သယ်ဆောင်ကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကသင်ဘွတ်ဖိနပ်ကြိုက်တယ်လျှင်, ဘွတ်ဖိနပ် Fabi ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကတရားစွဲထားကြသည်, သင်တစ်ဦးထက်ပိုတာရှည်ခံအသားအရေချင်ပါတယ်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤမော်ဒယ်သားရေဗားရှင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒလိုင်းများတွင် ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဘွတ်ဖိနပ် Fabi သင်ခြေကျင်းကနေမဆို Shaft ထံမှမော်ဒယ်များရှာပြီးဘွတ်ဖိနပ်ကိုတက် polusapog နှင့်ရွေးချယ်စရာဖနောင့်အမျိုးမျိုးနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး platform ပေါ်တွင်အမျိုးသမီးဖိနပ်
တွင်းနှင့်အတူဇာ-up, ဖိနပ် 4
ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူ Beige ခြေနင်း
Clover မြက်ခင်း - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ
မင်္ဂလာဆောင်အစီအစဉျ: Penn Badgley လက်ထပ်အဆိုတော် Kirk ကဒိုမီနို
Imereti အတွက် Khachapuri
ရေချိုးခန်းအတွင်းမျက်နှာကျက်ပြီး - သင်ကအကောင်းဆုံး option ကိုရှေးခယျြကူညီရန်စိတ်ကူးများဒီဇိုင်း
Evernote - ဤအစီအစဉ်နှင့်မည်သို့အသုံးပြုသည်အဘယ်နည်း
အမြိုးသမီးမြားရဲ့အဝါနုရောင်ရှိသောကုတ်အင်္ကျီ - တစ်ဖက်ရှင်ပုံရိပ်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခြေခံ
Taurus လူနှင့် Taurus အမျိုးသမီးတစ်ဦး - အသုံးပြုပုံများ
လက်သည်းဒီဇိုင်း - ဆောင်းရာသီ 2017
အိမ်တွင်းဒိန်ခဲကနေဒိန်ခဲကိတ်မုန့်ချက်ပြုတ်ရန်ကဘယ်လို - ရိုးရှင်းတဲ့စာရွက်
Chrissy Teigen နှင့်မင်းဂျွန်စိုးတစ်စက္ကန့်ကလေးသူငယ်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်
မိတ်ကပ်မပါဘဲ Ani Lorak